Khilaafka C/weli Gaas & Ku-xigeenkiisa Camey oo gaaray heerkii ugu sareeyay - Hablaha Media Network
Khilaafka C/weli Gaas & Ku-xigeenkiisa Camey oo gaaray heerkii ugu sareeyay
HMN:- Waxaa sii xoogeysanaaya khilaaf Siyaasadeed maalmahaani ka dhextaagnaa Hogaamiyaha maamulka Puntland C/weli Gaas iyo Ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar.
Khilaafka labada mas’uul ayaa bilowday kadib markii Cabdixakiin Cumar uu Hogaamiyaha maamulka u dib maray awooda maamulka mudadii uu ku maqnaa dalka dibadiisa.
Khilaafka labada Hogaamiye oo maraaya meel xun ayaa sii xoogeystay kadib markii Camey uu shaqo ka joojin ku sameeyay Taliyaha ciidamada booliska Puntland Jen, Cabdulqaadir Faarax Shire (Ereg) iyadoo uu C/weli Gaas horay uga digay in la faragaliyo shaqada Ereg.
Khilaafka labada mas’uul ayaa waxaa sidoo kale qeyb ka ah go’aanka uu Hogaamiye ku-xigeenka maamulka Camey uu ka qaatay shirka Kismaayo oo uu sheegay inaanu Puntland ka qeybgali doonin.
Cameey waxa uu sheegay in Shirkaasi aysan dani ugu jirin Umadda Soomaaliyeed, sidaa aawgeedna ay ka baaqsan doonaan.
Golaha Wasiiradda maamulka Puntland ayaa kulan ay yeesheen ku sheegay in shirkaasi uu muhiim u yahay , isla markaana Puntland ay ka qeyb gali doonto.
Waxgaradka Puntland qaarkood ayaa sidoo kale xaqiijiyay in khilaafka uu ka dhashay go’aankii Puntland ee Khaliijka Carabta, Xil ka qaadista Erga iyo Go’aanka uu Camey keligii ka gaaray shirka Kismaayo.
Go’aanka Cameey uu ku shaaciyay inaanu Puntland ka qeybgali doonin shirka Kismaayo kadib ayaa waxaa go’aan kaa lamid ah qaatay C/weli Gaas oo ku dhawaaqay in Puntland ay ka qeybqaadan doonto shirka Kismaayo.
C/weli Gaas iyo Cameey ayaa sidoo kale ku kala booday dhowr kulan oo la rumeysan yahay inuu salka ku hayay siyaasada maamulka kala dhexeysa dowlada Federaalka iyo arrimo kale.
Tilaabooyinka labada hogaamiye ayaa u muuqanaaya kuwo kala duwan,isla markaana uu jiro Khilaaf aan qarsooneyn oo heerkii ugu sareeyay gaarsiisan.
Si kastaba ha ahaatee, khilaaf kan la mid ah ayaa waxa uu ka dhex aloosan yahay Hogaamiyayaasha Gobolada iyo ku-xigeenadooda.